Gudomiyha baalamaanka soomaliya ayaa magacaabay gudiga qaban qaabinaya doorashada madaxweeynaha baarlamaankuna ansixiyay.
Posted by baarlin xaji on 31/08/2012 Xubnaha guddigan ayaa go'aan ka gaaraya xilliga ay dhacayso tartanka doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya .
Kulan ay ka qaybgaleen 204 xidlhibaan oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ka dhacay Muqdisho ayaa lagu doortay guddiga doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo ka kooban 16-xubnood, kuwaasoo guddoomiye uu u yahay Jen. Muuse Xasan Cabdulle oo ahaa guddoomiyihii KMG ah ee baarlamaanka Soomaaliya.
Guddiga doorashada madaxweynaha oo ka kooban min saddex xubnood oo ka yimid shanta beeleed ee baarlamaanku ka kooban yahay ayaa waxay magacyadoodu kala yihiin: 1.Xildhibaan Jen. Muuse Xasan Cabdulle
2.Xildhibaan Maxamed Cumar Maxamuud
3.Xildhibaan Ibraahim Saalax Deyfullaah
4.Xildhibaan Axmed Cismaan Ibaahim
5.Xildhibaan Maxamed Sheekh Aadan Hiiraale
6.Xildhibaan Daahir Amiin Jeesoow
7.Xildhibaan Axmed Aadan Cabdiraxmaan
8.Xildhibaan Cismaan Maxamed Cabdi (Daallo)
9.Xildhibaan Axmed Aadan Axmed 10.Xildhibaan Cismaan Libaax Ibraahim
11.Xildhibaan Aweys Cabdullaahi Ibraahim
12.Xildhibaanad Khadiijo Maxamed Diiriye
13.Xildhibaanad Maryan Cariif Qaasim
14.Xildhibaanad Saynab Maxamed Caamir
15.Xildhibaanad Sacdiyo Careys Ciise
16.Xildhibaanad Muumino Sheekh Cumar Guddigan ayaa waxaa ansixiyay 200 oo xildhibaan, hal mudane ayaa diiday saddex kalena way ka aamuseen, iyadoo guddoomiyaha baarlamaanka uu ku dhawaaqay in guddigan ay ansax yihiin ayna howshooda wadan karaan.
Howlaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa si rasmi ah Muqdisho uga billowday iyadoo baarlamaanka cusub ay horyaallaan howlo fara badan oo ay ka mid yihiin hagaajinta sharciga dalka oo xal ka gaaristooda ay baarlamaannadii hore ku guuldarreysteen.